Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » I-COVID-19 ibulala uhambo lweshishini laseMelika
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ngaphandle kokuphakama kukhenketho ehlotyeni, uphononongo olutsha lubonisa umbono omdaka wokuhamba kweshishini kunye neminyhadala, enika ingxelo engaphezulu kwesiqingatha sengeniso yehotele kwaye ayilindelwanga ukuba ibuyele kumanqanaba angaphambi kobhubhane kude kube ngu-2024.
I-67% yabahambi bamashishini base-US baceba ukuthatha iihambo ezimbalwa.
Iipesenti ezingama-52 zabahambi bamashishini baseMelika banokucima izicwangciso zokuhamba esele zikhona ngaphandle kokuhlengahlengisa.
I-60% yabahambi bamashishini base-US baceba ukuhlehlisa izicwangciso zokuhamba esele zikhona.
Abahambi beshishini lase-US banciphisa izicwangciso zokuhamba phakathi kwamatyala anyukayo e-COVID-19, nge-67% icwangcisa ukuthatha iihambo ezimbalwa, i-52% inokuthi icime izicwangciso zokuhamba esele zikhona ngaphandle kokucwangciswa, kunye ne-60% icwangcisa ukuhlehlisa izicwangciso zokuhamba esele zikho, ngokutsho kwelizwe elitsha uphando olwenziwe egameni leAmerican Hotel & Lodging Association (AHLA).
Ngaphandle kokuphakama kukhenketho ehlotyeni, uphando olutsha lubonisa umbono omdaka uhambo loshishino kunye neziganeko, ezinika ingxelo engaphezulu kwesiqingatha sengeniso yehotele kwaye kungalindelwanga ukuba zibuyele kumanqanaba esandulela ngubhubhane kude kube ngowama-2024.
Ukusilela kwe uhambo loshishino kwaye iminyhadala ineempembelelo zokuqeshwa ngokuthe ngqo kwiipropathi zehotele, nakuluntu ngokubanzi. Iihotele kulindeleke ukuba ziphele ngo-2021 ziyekise malunga nama-500,000 emisebenzi xa kuthelekiswa nonyaka ka-2019. Kubo bonke abantu abali-10 abaqeshwe ngqo kwipropathi yehotele, iihotele zixhasa imisebenzi eyongezelelekileyo engama-26 ekuhlaleni, kwiindawo zokutyela nakwiivenkile ukuya kwiinkampani ezibonelela ngeehotele- oko kuthetha ukuba zongezwe phantse kwisigidi esi-1.3. imisebenzi exhaswa ziihotele nayo isemngciphekweni.
Uphando lwabantu abadala abangama-2,200 11 lwenziwa ngo-Agasti 12-2021, 414. Kwaba bantu, abantu abangama-18, okanye i-XNUMX% yabaphenduli, ngabahambi beshishini-oko kukuthi, abo basebenza emsebenzini oquka uhambo olunxulumene nomsebenzi okanye abalindele ukuhamba ishishini ubuncinci kube kanye phakathi kwangoku nokuphela konyaka. Iziphumo eziphambili phakathi kwabahambi beshishini zibandakanya oku kulandelayo:
I-67% inokuthi ithathe uhambo olumbalwa, ngelixa i-68% inokuthi ithathe uhambo olufutshane
Iipesenti ezingama-52 zithi zinokuthi zirhoxise izicwangciso zokuhamba esele zikhona kungekho zicwangciso zokuhlengahlengisa
I-60% inokuthi ihlehlise izicwangciso zokuhamba ezikhoyo kude kube ngumhla olandelayo
Ama-66% kulindeleke ukuba ahambe kuphela kwiindawo anokuqhubela kuzo